Imisa Masuul Oo Ka Tirsan Xukuumada Madaxweyne Muuse Ayuu Khilaaf U Dhaxeeyaa, Maxayse Isku Hayaan?...Warbixin
(Hadhwanaagnews) Friday, November 09, 2018 17:41:44
Hargeysa(HWN):-Xukuumada madaxweyne Muuse Biixi oo dhawaan baarka ka jaraysa mudo sanad ah ayaa hadana waxa jira caqabado badan oo ka hor yimid mudadaas ay jirtay.
Caqabadaha ugu waa weyn ee ka hor yimid xukuumada oo ay ugu horayso kala qaybsanaanta bulshada ee ka dhalatay doorashadii madaxtooyada ilaa hada taagan ka sakow waxa jira kuwa ay iyadu abuurtay oo saameeyey waxqabadyadii laga filayey mudo sanad ku dhaw oo ay jirtay.
Khilaafaadka u dhaxeeya masuuliyiin ka tirsan xukuumada madaxweyne Muuse Biixi ayaa ka mid ah caqabadaha ka hor yimid, iyada oo ay jiraan tiro masuuliyiin ah oo uu
dhaxeeyo is afgaran waa la xidhiidha hawlaha ay u qaabilsan yihiin qaranka.
Wasiirka gaadiidka iyo horu marinta jidadka ayaa haatan ah masuulka uu khilaafku u dhaxeeyo xubno iskugu jiro wasiiro iyo maareeyayaal kuwaas oo uu ugu horeeyo maareeyaha hay’adda waddooyinka oo ay isku hayaan awoodaha ay kala leeyihiin.
Khilaafka wasiirka gaadiidka iyo maareeyaha hay’adda wadooyinka ayaa sameeyey hawlihii labadaas hay’adood ay u qaabilsanaayeen qaranka, iyada oo warar ay heshay shabakada Hadhwanaagnews ay sheegayaan inay taagan tahay shaqadii isla markaana shaqaalihii ay la kala safan yihiin labada masuul ee khilaafku u dhaxeeyo.
Gudoomiyaha baanka dhexe Cali Ibraahin(Baqdaadi) ayuu khilaaf u dhaxeeyaa agaasamaha baanka, khilaafkaas oo hore dibada ugu soo baxay ayaan la shaacin wax xal ah oo laga gaadhay.